WinX DVD Ripper, gbanwee DVD ochie gị na MP4 mfe | Akụkọ akụrụngwa
Na oge ncheta nke Star Wars Day, WinXDVD chọrọ iji ya mee ya na-enye ohere nke inweta onyinye dị iche iche dịka PS4, DVD nke Star Wars saga, ihe egwuregwu ụmụaka na 500 akwụkwọ ikike kwa ụbọchị nke ngwa WinX DVD Ripper.
N'ihi ngwaọrụ ndị dị ka WinX DVD Ripper anyị nwere ike ịnyefe faịlụ ọ bụla site na diski DVD n'ihe dị ka nkeji ise na GPU acceleration. Obere oge ịhụ etu oge gara aga ọ were mee nkwado ndabere ihe dị ka elekere na ọkara ma ọ bụ oge ụfọdụ ruo abụọ dabere na ibu ọrụ.
Makingmepụta otu ihe nkiri ochie ma ọ bụ nke oge a na MP4 ga-enyere gị aka ibupụ ya, dịka ọmụmaatụ, na pendrive ma lelee ya n'enweghị onye ọkpụkpọ. E wezụga nke ahụ, e nwere ntakịrị ihe karịrị usoro atọ iji bido na nkeji ole na ole iji bupụ ya na folda ndabara nke ngwa ahụ, na vidiyo nke WinXVideos.
1 Nye ego iji mee ụbọchị Star Wars
2 Tọghata a nkiri ka ọzọ format na atọ nzọụkwụ
3 A nnọọ vasatail ngwa
4 Esi tọghata video na ngwa
Nye ego iji mee ụbọchị Star Wars
Kwa Mee 4, Star Wars Day na-eme emume, aha aka George Lucas kere ma bụrụ onye amụrụ na 1979, ngụkọta nke 42 afọ gara aga kemgbe ihe nkiri mbụ. WinXDVD kpebiri inye onyinye pụrụ iche yana onyinye maka ndị sonyere, ndị ga-enwe ike merie DVD nke PS4 saga.
WinXDVD's Star Wars Day emume mgbasa ozi nwere ike isonye site na ịkekọrịta foto Star Wars na mgbakwunye na ịza ajụjụ Star Wars na isonyere WinXDVD Movies Facebook Group. Ọzọkwa, mkpụrụ 500 nke WinX DVD Ripper nwere ike merie site na ịkekọrịta kwa ụbọchị.
Star Wars mkpọsa bụ agba gbaa abụọ, agba nke mbụ bidoro n’abalị iri abụọ na anọ ruo n’abalị ise n’ọnwa ise; nke abụọ bụ site na Mee 24 ruo 5. Onyinye onyinye nke WinX DVD Ripper na-enye ndị ọrụ ohere ịnweta sọftụwia zuru ezu maka ụbọchị 6 mgbe ebidochara ọrụ. Nwelite na ụdị WinX DVD Ripper na ndụ niile nwere onyinye pụrụ iche maka obere oge, maka nke a, ị ga-agbalite ikike ikikere nke WinX DVD Ripper na onyinye pụrụ iche.
Tọghata a nkiri ka ọzọ format na atọ nzọụkwụ
Ọtụtụ ihe nkiri na-enwe ihe nkiri na CD na DVD, na-echekwa ọtụtụ fim, yana usoro ihe nkiri na telivishọn. Site na draịvụ ike taa, ọ dị mkpa naanị ịfefe ya na otu n'ime ha wee kpọọ ha ngwa ngwa na enweghị mkpa ọkpụkpọ DVD / Blu-Ray, rụọ ọrụ na ngwa WinX DVD Ripper na-enye aka.
Mgbe ị mepere WinX DVD Ripper, ọ na-egosi gị interface doro anya ma dị mfe, ọ na-egosikwa usoro mmeghe iji malite iji ngwaọrụ edezi. Dị ka e gosiri na weebụsaịtị, e nwere usoro atọ ịkwesịrị ịmalite ma dọwaa ihe nkiri ahụ, usoro ma ọ bụ akwụkwọ akụkọ.
A ga-egosipụta usoro ahụ na windo aka nri elu, yabụ ị ga-ahụ onyonyo niile ruo na njedebe wee kpọọ faịlụ ahụ na ngwaọrụ ọ bụla nke na-egwu usoro ahụ. N'ịbụ MP4, enwere ọtụtụ ndị na-eme ya, gụnyere telivishọn na Smart TV site na ọdụ ụgbọ USB dị.
Ngwa ahụ nwekwara ọtụtụ ụdị mmepụta ọzọ ma ọ bụrụ na ịchọrọ ya na ndị ọzọ karịa Mp4, ozugbo ịtinye diski ahụ, pịa Disc (akara ngosi DVD), pịa ya ma ọ ga-amalite ibu ruo mgbe ọ gosipụtara gị faịlụ mmepụta niile, n'etiti Ha bụ ndị a kacha mara amara dị ka AVI, MP4 maka iPad na iPhone, WMV, MPG, M4V na MOV, n'etiti ọtụtụ ndị ọzọ.
A nnọọ vasatail ngwa
WinX DVD Ripper nwere ike ịpị DVD ị nwere ochie na MP4, FLV, AVI, MOV, MP3, yana ị nwere ike ịgụta maka iPhone, iPad, Android, Windows na Mac. ihe nkiri ma ọ bụ faịlụ ahụ edere na diski ahụ ịchọrọ wepụ na kọmputa ahụ n'oge ahụ.
Tụkwasị na nke a, ngwá ọrụ ahụ na DVD ọ bụla, gụnyere DVD mebiri emebi, DVD ndị ahaziri nke ọma, DVD ochie, ndị a tọhapụrụ ọhụrụ, na ihe ọ bụla site na mkpokọta gị. Ọ na-agụkarị diski ọ bụla na-enweghị nsogbu, na-eme nnomi zuru oke nke vidiyo ndị ahụ ị zọpụtara.
WinX DVD Ripper gafere ịgafe faịlụ niile ngwa ngwa, ọ na-enyekwa nhọrọ ịkpụ, jikọta, belata akụkụ nke vidiyo, gbakwunye ndepụta okwu ma ọ bụ gbanwee oke. Ngwa ahụ gụnyere teknụzụ ngwangwa ngwanrọ nke Layer 3 iji nweta ọrụ ahụ ihe dị ka nkeji ise, oge nke dị obere.
Esi tọghata video na ngwa
Iji tọghata DVD ngwa ngwa n'ime ogugu usoro maka ngwaọrụ ọ bụla, anyị chọrọ diski ahụ na ajụjụ yana onye na-agụ DVD / ndekọ na DVD, ma Windows ma ọ bụ Mac OS. Iji mepụta otu mee ihe ndị a:
Fanye DVD diski n'ime ihe ọkpụkpọ DVD / onye edemede
Pịa na Disc na-egosi okwu DVD wee pịa «Ezi»
Ọ ga-ewe naanị obere sekọnd iji kwado inye gị usoro niile nke enwere ike ịme faịlụ ahụ
Họrọ mmepụta format ị chọrọ, ihe atụ otu n'ime ndị kasị eji ugbu a bụ MP4, pịa "Ezi" ọzọ na-amalite ripping, pịa "Run" button na-acha anụnụ anụnụ na-eche maka oru ngo rụchaa
Cheta na ọ na-egosi gị ụzọ ebe faịlụ ahụ na-aga n'okpuru, ebe ọ na-ekwu "nchekwa folda"
Ọ bụrụ na ịchọrọ ngwa ahụ, cheta na ịnwere ike ịnweta ikikere gị n'efu na-ekere òkè na mgbasa ozi Star Wars Day.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » software » Imeri Star Wars PS4, DVD na ihe egwuregwu. Soro ma nweta WinX DVD Ripper n'efu